Mauritius inopedzisa kuzvimiririra kune vashanyi vakasvinwa nemishonga yakabvumidzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mauritius Breaking Nhau » Mauritius inopedzisa kuzvimiririra kune vashanyi vakasvinwa nemishonga yakabvumidzwa
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mauritius Breaking Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mauritius inogumisa kwega kwevatashanyi vakasungwa neimwe yemasere akabvumidzwa majekiseni eECVID-19
Denda iri rakakanganisa zvakanyanya hupfumi hwenyika. Munguva yegore rapfuura rezvemari, GDP yayo yakanyura 15%. Basa rega rega rechina muMauritius rine chekuita nekushanya, nemugove waro weGDP unosvika 24%.
Mauritius yakavhara zvachose miganhu yayo kuvashanyi vekunze pakutanga kwedenda munaKurume 2020.
Mauritius yakavhurazve miganhu yayo muna Chikunguru 15, 2021, asi vese vatsva vanobva kune dzimwe nyika vanofanirwa kuvharirwa kwemazuva gumi nemana.
Russian-inogadzirwa Sputnik V ndeimwe yevasere majekiseni anorwisa coronavirus anotenderwa pachitsuwa.
Zviremera zveMauritius zvakazivisa kuti kutanga musi waGumiguru 1, zvese zvinorambidzwa kufamba kwevashanyi zvakaiswa jekiseni neimwe yemishonga mitanhatu yekurwisa coronavirus yakatenderwa pachitsuwa ichi yabviswa.
Miganhu ye Morishiyasi vakavharwa zvachose kuvashanyi vekunze nekutanga kwechirwere ichi munaKurume 2020. Ivo vakavhurwazve muna Chikunguru 15, 2021 asi, vatsva vakauya vaifanira kugara kwemazuva gumi nemana. Parizvino, mamiriro ekugara evashanyi vekunze akabayiwa majekiseni nemajekiseni anotenderwa nevakuru vemunharaunda akarerutswa.
Sekureva kwemumiriri weAmerican Embassy muMauritius, Sputnik V inogadzirwa neRussia iri pakati pemakemikari masere eECVID-19 anotenderwa pachitsuwa ichi.
Vashanyi veRussia vakatemerwa Sputnik V vachisvika mukati Morishiyasi havafanirwe kucherechedza kugara kwavo kwavo voga kutanga nhasi uye vanogona kufamba vakasununguka nezvenharaunda yenyika ino yechitsuwa, akadaro mumiriri.
"Pakutanga, vaifanirwa kushandisa kugara kwavo kwavo kwega kwemavhiki maviri munzvimbo yemahotera," akadaro, achiwedzera kuti zvinotarisirwa kuti nendege dzakananga pakati peMauritius nemaguta eRussia dzichazotangazve munguva pfupi iri kutevera.
Yakagadzirwa neRussia Sputnik V mushonga unoshandiswa zvakanyanya mu Morishiyasi. Yayo yekutanga batch yakasvika munyika muna Chikumi 30. Kutanga muna Chikunguru 12, Sputnik V yanga ichishandiswa muMauritius 'yenyika yekudzivirira yekutyaira pamwe nemamwe mapfuti.
Mauritius ndomumwe wevatungamiriri muAfrica maererano nehuwandu hweavo vakachekwa kurwisa coronavirus. Mamwe mamirioni 1.63 epfuti anopikisa COVID-19 akashandiswa pachitsuwa ichi, vanhu 788,000 kana 62.2% yevagari vapedza kosi yakazara yekudzivirira.
Denda iri rakakanganisa zvakanyanya hupfumi hwenyika. Munguva yegore rapfuura rezvemari, GDP yayo yakanyura 15%. Basa rega rega rechina muMauritius rine chekuita nekushanya, nemugove waro weGDP unosvika 24%. Hurumende yenyika iyi iri kuda kukoka vashanyi vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu ezviuru kuMauritius mumwedzi gumi nemiviri inotevera.